Konya နှင့် Kayseri စီးပွားရေးမျှော် BCCI စီမံကိန်းများ၏အမှတ်တံဆိပ်ခဲ့ - rayhab ဖြစ်ပါသည်
HomeတူရကီMarmara ဒေသကြီး16 BursaKonya နှင့် Kayseri စီးပွားရေးကမ္ဘာ့ဖလား BCCI အမှတ်တံဆိပ်စီမံကိန်းများကွညျ့ရှု
13 / 08 / 2019 Levent Elmastaş 16 Bursa, အထွေထွေ, Marmara ဒေသကြီး, တူရကီ 0
Konya နှင့် Kayseri ၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းလောက BCCI အမှတ်တံဆိပ်စီမံကိန်းကိုလေ့လာ
စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းနှင့်စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များ Bursa ကုန်သည်ကြီးများအသင်း (BCCI) ကိုစီးပွားရေးလောကအဘို့အစီမံကိန်းများကိုတူရကီများအတွက်မော်ဒယ်ဖြစ်ဆက်လက်ရှိရာဘဝနမူနာ dosab't ခဲ့ရသည်။ Kayseri နှင့် Konya စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကိုယ်စားလှယ်များအကြီးစားစီမံကိန်းများကိုကျော်ကြည့်လျှင်, Bursa သို့ရောက်ကြ၏။
high-tech R & D နှင့် BCCI ရဲ့အကငျြ့ကိုချိုးဖျက်ဖို့တစ်ဦးချင်းစီစီမံကိနျးအတှကျသက်မွေးဝမ်းကျောင်းသင်တန်းပေးခြင်းစီမံကိန်းသည်အများအပြားအဖွဲ့အစည်းများနှင့်အဖွဲ့အစည်းများအားဖြင့်မှုတ်သွင်းခံရဖို့ရောက်နေပါတယ်။ Kayseri ကုန်သည်ကြီးများ, Kayseri နှင့်စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့စက်မှုလက်မှုကုန်သည်ကြီးများအသင်း၏ Konya ကုန်သည်ကြီးများအသင်း, DOSAB engagaments ရဲ့ go တွေ့ရှိခဲ့ BCCI ရဲ့ကျောင်းဝင်းအတွင်းစီမံကိန်းသွားရောက်ခဲ့သည်။ Kayseri ကုန်သည်ကြီးများဒုဥက္ကဋ္ဌ Hasan Koksal, Kayseri ကုန်သည်ကြီးများဘုတ်အဖွဲ့အဖွဲ့ဝင် Mehmet Sarıalp, Doğrul BCCI ဒုဥက္ကဋ္ဌ Cuneyt Sen နဲ့ BCCI ဘုတ်အဖွဲ့အဖွဲ့ဝင် Muhsin နှင့်အတူအတွက် Konya ကုန်သည်ကြီးများဘုတ်အဖွဲ့အဖွဲ့ဝင် Fahrettin Özkulနှင့် Fahrettin ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့များကြောင်းKoçaslလိုက်ပါသွားခဲ့သည်။
"ကျနော်တို့ရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းစီမံကိန်းများ WE ထုတ်လုပ်ရန်ဆက်လက်"
BCCI ဒုဥက္ကဋ္ဌ Cuneyt Sen, Bursa အတွက်ထုတ်လုပ်မှုအခြေစိုက်စခန်းအဖြစ်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးနှင့်စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များ Bursa ကုန်သည်ကြီးများအသင်း, တူရကီရဲ့အဆင့်မြင့်နည်းပညာ, R & D နှင့်ခေါင်းဆောင်များအဘို့စီမံကိန်းများထုတ်လုပ်သူတို့သက်မွေးဝမ်းကျောင်းသင်တန်းတစ်မြို့ရှိကပြောသည်။ အစဉ်အဆက် xnumx'y မကြာသေးမီကစီမံကိန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုကြောင်းမှတ်ချက်ပြုထက်ပိုမိုအားကောင်းဖန်တီးမှု Bursa ဆီသို့ဦးတည်ရူပါရုံကိုနှင့်အတူ "Bursa တူရကီတိုးတက်ကြီးပွားတိုးတက်ကြီးပွားလိုလျှင်" Bursa အပေါငျးတို့သဒေသများရှိ Sener " သာ. အစွမ်းထက်အနေအထားမှဝင်ရောက်ခွင့်ကိုပေး။ ကျနော်တို့ကပိုကျယ်ပြန့်ဖြစ်ချင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကမ္ဘာကြီးတိုင်းပြည်များ၏တောင်းဆိုချက်များနှင့်အညီပြင်ဆင်အရည်အသွေးမြင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းစီမံကိန်း၏ကျွန်ုပ်တို့၏အမှတ်တံဆိပ်။ ကျွန်တော်တို့ဟာမတူညီတဲ့မြို့ကြီးများအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့စီမံကိန်းများကိုသဘောပေါက်သောဤအချက်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့တိုင်းပြည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်အထောက်အကူပြုဖို့အလွန်အမင်းအရည်အချင်းပြည့်အကောင်အထည်ဖော်ခံရဖို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အစွမ်းကုန်ကူညီပံ့ပိုးပေးဖို့အဆင်သင့်ရှိပါတယ်။ အဖြစ်ဝေး BCCI အဖြစ်ယနေ့ပြီးနောက်ကျွန်ုပ်တို့စီးပွားရေးလောကအဘို့မလြော့ထုတ်လုပ်စီမံကိန်းများကိုဆက်လက်ပါလိမ့်မယ်။ "
"ONE MORE အဆင့်အတွက်မွေးမြူ TARGET သို့"
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကိုသူတို့ကကမ္ဘာကြီးအတွက်ထုတ်လုပ်ရန်စီမံကိန်းများ၏ဝယ်လိုအားကိုတိုးမြှင့်ဖို့ဆက်လက်မည်ဟု BCCI ဘုတ်အဖွဲ့အဖွဲ့ဝင် Muhsin ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့အရည်အချင်းပြည့်မီအလေးပေးသူတို့Koçaslလုပ်ကိုင်ရန်ခဲ့စီမံကိန်းများကိုလည်းသူတို့တူရကီပျံ့နှံ့ဖို့ကြိုးစားနေခဲ့ကြကြောင်းမှတ်ချက်ပြုခဲ့သည်။ အဆိုပါစီမံကိန်းများကိုမှမြင့်မားသောအကျိုးစီးပွားများ၏ BCCI ရဲ့ dosab't ၏ကွဲပြားခြားနားသောအဖွဲ့အစည်းများနှင့်အဖွဲ့အစည်းများဘဝမှဆောင်ခဲ့သဖြင့်, စံပြအဖြစ်တာ၏ "ကျနော်တို့အသက်တာ dosab't ရှိသည်ဟုကျွန်တော်တို့ရဲ့စီမံကိန်းများအဖြစ် BCCI တိုင်းပြည်လွှဲပြောင်းKoçaslအကျိုးရှိမည်ဟုကျွန်ုပ်တို့၏တိုင်းပြည်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအရည်အသွေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဆိုင်ရာကူညီပံ့ပိုးရန်လုပ်ဆောင်နေကြပါသည်။ R & D နှင့်ဆန်းသစ်တီထွင်မှု, သက်မွေးဝမ်းကျောင်းသင်တန်းနှင့်အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်ထစီမံကိန်းအများအပြားဒေသများရှိခန္ဓာကိုယ်၌ပထမဦးဆုံးကိုင်ခြင်းနှင့်မော်ဒယ်တစ်ဦးဖှံ့ဖွိုးတိုးတကျွန်တော်တို့ရဲ့နိုင်ငံအများအပြားဒေသများရှိအကျိုးရှိမည်ပင်ဖြစ်သည်အဖြစ်ယူပြီးကျွန်တော်တို့ရဲ့ 4.0 စိတ်ဝင်စားကြောင်းဖေါ်ပြခြင်းစက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်စွမ်းအင်ထိရောက်မှု။ "သူကဆိုသည်။
ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့များ BCCI ရဲ့တန်ဖိုးကို-added စီမံကိန်းများ, အသက်မွေးမှုအရည်အချင်းစာမေးပွဲနှင့်အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်စင်တာ (MESYEB), Bursa နည်းပညာ Co-ရာ၌ခန့်နှင့်သုတေသနနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးစင်တာ (BUTEKOM), BCCI ပညာရေးဖောင်ဒေးရှင်း (BUTGEM), ကျွမ်းကျင်မှုများနှင့်ဒစ်ဂျစ်တယ်ကူးပြောင်းခြင်း Center က-Bursa မော်ဒယ်စက်ရုံ (BMF) ကျင်းပခဲ့သောအစည်းအဝေးပြီးနောက် စွမ်းအင်အသုံးစင်တာ (EVM) နှင့်အချက်အပြုတ်အကယ်ဒမီ, စီမံကိန်း၏အသေးစိတ်စာမေးပွဲ bulunarak သည့်အဖွဲ့အစည်းရဲ့အာဏာပိုင်များအနေဖြင့်အသေးစိတ်သတင်းအချက်အလက်ကိုလက်ခံရရှိခဲ့သည်။
အုပ်ချုပ်ရေးမှူး Jumblatt, ကိုပြန်လည်သုံးသပ်သည့် BCCI ရဲ့နည်းပညာ oriented စီမံကိန်းများ 21 / 06 / 2019 ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့စီမံကိန်းငါ BCCI ဂုဏ်ပြုပါသည် "ရူပါရုံကို Bursa အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဂျိမ်းစ် Jumblatt ကြည့်ရှုခြင်းဖြင့်အကောင်အထည်ဖော် Bursa ကုန်သည်ကြီးများနှင့်စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များ (BCCI) စီမံကိန်းများကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့မြို့တော်ရဲ့စီးပွားရေးကိုထည့်သွင်းတန်ဖိုးကိုပေးပါလိမ့်မယ်။ ကျနော်တို့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရည်မှန်းချက်များနှင့်အတူအလုပ်လုပ်ကိုင်တာအားကောင်း Bursa အတွက်ကျွန်တော်တို့ကိုကူညီပံ့ပိုးရန်ဆက်လက်ပါလိမ့်မယ်။ "သူကပြောခဲ့သည်။ BCCI ဥက္ကဋ္ဌအီဗရာဟင် Burkay, ယာကုပ် Jumblatt Bursa မော်ဒယ်စက်ရုံ, စွမ်းအင်အသုံးစင်တာ (EVM) ပြီးနောက် Bursa ၏အုပ်ချုပ်ရေးမှူးနှင့်တွေ့ဆုံခဲ့သည်သူကို BCCI ညီလာခံတွင်နိုင်ငံတော်သမ္မတအလီ Ugur နှင့် BCCI ဘုတ်အဖွဲ့အဖွဲ့ဝင်များ, Bursa နည်းပညာ Co-ရာ၌ခန့်နဲ့ R & ကျင်းပခဲ့ Bursa မော်ဒယ်စက်ရုံအစည်းအဝေး Gökmenလေကြောင်းသင်တန်းကျောင်းနှင့်အတူ: D စင်တာ (BUTEKOM) (GUHE ငါ) သွားရောက်ခဲ့ပြီး ...
အလင်းနှင့်အတူစောင့်ရှောက်ခြင်း၏အနာဂတ်အပေါ် BCCI ရဲ့ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးကဏ္ဍအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ 03 / 04 / 2017 BCCI ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးအလင်းစက်မှုဝန်ကြီးဌာန၏အနာဂတ်အပေါ်အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲကျင်းပ: တူရကီနှင့်စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးနှင့်စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များ Bursa Bursa ကုန်သည်ကြီးများအသင်း (BCCI) ၏ကြီးထွားဖို့တန်ဖိုးကိုထည့်သွင်းသောစီမံကိန်းများ, အထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးကဏ္ဍအတွက်အရေးပါတဲ့အဖွဲ့အစည်းကမှပိုပြီးလက်မှတ်ပေါင်းသွင်းယူပေးခဲ့သည်။ အဆိုပါ BCCI မှာကျင်းပလူထုအဖွဲ့အစည်းများ, ပညာရှင်များနှင့်ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးကဏ္ဍ၏ကိုယ်စားလှယ်များကိုယ်စားလှယ်များ, '' ကဏ္ဍထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးဆိုင်ရာအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ၏အနာဂတျအတှကျစုဝေးရောက်လာကြ၏။ တူရကီနှင့် Bursa BCCI စီးပွားရေးကိုဦးတည်သည်၎င်း၏ရွေ့လျားဆက်လက်ကကဏ္ဍ၏အရည်အသွေးတိုးတက်မှုနှုန်းဆီသို့ဦးတည်အလုပ်လုပ်နေဆဲဖြစ်သည်။ Bursa အတွက်ကျွမ်းကျင်မှုတစ်စင်တာဖြစ်လာသည့် BCCI 'ဆိုတဲ့ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးကဏ္ဍတန်ဖိုးကိုထည့်သွင်းမည်ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးဆိုင်ရာအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲအားဖြင့်တည်ခင်းဧည်ခဲ့သည်။ ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးအလှူငွေ BCCI ဘုတ်အဖွဲ့အဖွဲ့ဝင်ပေါ်လစီ Duran, BCCI ၏ကောင်စီကစီစဉ်တဲ့အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲမှာစကားပြောသော ...
အဆိုပါ BCCI ရဲ့အသစ်စမ်းသပ်ရေးစင်တာကနေအပြည့်အဝမှတ်ချက်ကြွကဏ္ဍကိုယ်စားလှယ်များ 08 / 08 / 2019 Bursa ၏ဓာတ်လှေကားစက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များအသင်း (bursa) အဖွဲ့ဝင်များ, တွေ့ရသောစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေအတွက် '' ဓာတ်လှေကားအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးပစ္စည်းကိရိယာစမ်းသပ်မှုနှင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဗဟိုဌာန၏အများဆုံးယုံကြည်စိတ်ချရသောပုံစံအဖြစ်စမ်းသပ်ပြီး BCCI ကအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ဓါတ်လှေကားလုံခြုံရေး features ။ Bursa ဓာတ်လှေကားစက်မှုလုပ်ငန်းကိုယ်စားလှယ်များ, စမ်းသပ်နှင့်စစ်ဆေးရေးန်ဆောင်မှုများအတွက်လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ protocol များ၏စက်မှုလက်မှုနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာနတူရကီ၌, Lift အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးပစ္စည်းကိရိယာစမ်းသပ်မှုနှင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဗဟိုဌာနသွားရောက်လည်ပတ်သောဓာတ်လှေကားစက်မှုလုပ်ငန်းရဲ့ပထမဦးဆုံးနှင့်သာပြုပါရန်။ အလည်အပတ်ခရီး, BCCI စက်ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌ Cem Bozdag, ဿွာန် BCCI MESYEB Karakökနှင့် bursadan ဥက္ကဋ္ဌဂိဒေါင် Baki မှ General Manager အသင်းအဖွဲ့ဝင်များနှင့်အတူဝင်ရောက်ခဲ့သည်။ BCCI သမ္မတစက်ကောင်စီ "ပါဝါကဏ္ဍ add ပါလိမ့်မယ်" ...
Kayseri Kayseri, စီးပွားရေးလောကကနေ Samsun ရထားလမ်းခေါ်ဆိုခပြုပြင်ကြနေကြတယ် 14 / 10 / 2016 Kayseri စီးပွားရေးလုပ်ငန်း Kayseri Samsun ရထားလမ်းသငျသညျကိုပဌနာပြင်၏မှ: ပို့ကုန်များအတွက် Mersin ဆိပ်ကမ်းထွက်ပေါက်များကိုအသုံးပြုရန် Kayseri စီးပွားရေးသမားများ, သူတို့ကတိုက်တွန်းခဲ့သည် "။ ကျနော်တို့ Samsun အတွက်ထွက်ပေါက်တံခါးကိုစေချင် Kayseri, Samsun ရထားလမ်းကိုလည်းပြုပြင်ကြရရမယ်" ။ အဆိုပါကုန်သည်ကြီးများမာမွတ်Hiçyılmaz၏ Kayseri သမ္မတ, ပို့ကုန်တံခါးများ, သူ, Mersin များ၏ဆိပ်ကမ်းကုန်တင်နှုန်းထားများ၏ညည်းညူဟု "ကျနော်တို့ထွက်ပေါက်တံခါးကိုဖို့ Samsun ၏ဆောက်လုပ်ရေး၏လိုအပ်ချက်များကယုံကြည်ကြသည်။ အဲဒီမှာ Kayseri, Samsun အကြားရထားလမ်းဖြစ်ပါသည်, သို့သော်ပြုပြင်ကြရန်လိုအပ်ပါသည်" ဟု၎င်းကပြောသည်။ BLACK-မြေထဲနည်းလမ်း ... စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေး Kayseri ကုန်သည်ကြီးများအသင်း, အရှေ့ Karadeniz ဖွံ့ဖြိုးရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးစီမံကိန်းအတွင်းနေရာချပေးကြည်းတပ်ကနေမြေထဲပင်လယ်ကုန်သွယ်ရေးကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့တိုးမြှင့်ခြင်းအားဖြင့်တိုက်ရိုက်စီးပွားရေးပံ့ပိုးမှုအေဂျင်စီအောက်တွင်ထောက်ခံခဲ့ကြသည်။ အဆိုပါအစည်းအဝေးတွင်düzenlenenxnumx ...
İsa Apaydın TCDD Konya အတွက်စီမံကိန်းခဲ့ကွညျ့ရှု 09 / 06 / 2017 İsa Apaydın တူရကီပြည်နယ်မီးရထားသမ္မတနိုင်ငံ (TCDD) ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်: TCDD Konya စီမံကိန်း၌ရှိ၏ကွညျ့ရှု İsa Apaydınကျနော်တို့Kayacık Konya Konya YHT ဘူတာနှင့်ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေး Center ကတွေ့ရှိခဲ့ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသောစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေအပေါ်ကြီးကြီးမားမားတည်ဆောက်။ TCDD အထွေထွေဒါရိုက်တာ İsa Apaydınလက်ထောက်အထွေထွေမန်နေဂျာများ, ပုဂ္ဂလိကစာနယ်ဇင်းရုံးနှင့်ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးအကြံပေး, ဦးစီးဌာနမှအကြီးအကဲ,6။ ,7။ , ပြီးတော့ 8 ၏ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး။ ဒေသတွင်းမန်နေဂျာနှင့်အတူတွေ့ရှိရစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေ။ Apaydin ကုမ္ပဏီအရာရှိများအနေဖြင့်သတင်းအချက်အလက်လက်ခံရရှိပွဲချင်းပြီးဆနျးစစျကွောငျးကိုစီမံကိန်းများအပေါ်ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ကန်ထရိုက်တာ။
ဝန်ကြီး Arslan, သုံးသပ်ရန် TCDD Konya စီမံကိန်းများ 13 / 03 / 2018 ပို့ဆောင်ရေး, ရေကြောင်းရေးရာနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနဝန်ကြီး Ahmet Arslan, Çumra Konya Konya YHT ဘူတာKayacıkထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးရေးစင်တာများတွင်ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသောဆောက်လုပ်ရေးဆိုက်နှင့် Konya-Karaman မြန်နှုန်းရထားလမ်းနှင့်စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများတွင်တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ အမ်းစထရောင်းစီမံကိန်းများကို TCDD အထွေထွေဒါရိုက်တာပေါ်, မြန်နှုန်းမြင့်ရထားလမ်းတစ်ခုစမ်းသပ် drive ကိုလုပ်ဆောင် İsa Apaydınသတင်းအချက်အလက် မှစ. သူကိုလက်ခံရရှိခဲ့သည်။ အမ်းစထရောင်း, Konya, YHT ဘူတာဆောက်လုပ်ရေးဆိုဒ်စာနယ်ဇင်းအဖွဲ့ဝင်များမှကြေညာချက်တွင်ဖော်ပြထားသည်, "အားလုံးငါသည်ဤစီမံကိန်းကိုကျနော်တို့ Konya မျှော်လင့်ထားအမြန်နှုန်းမှာရွေ့လျားကြောင်းပြောရှိသည်သောအရေးကြီးသောအလုပ်ကြိုဆို။ ထိုအခါငါ Karamanli ၏ဝန်ဆောင်မှုကိုပူဇော်ရန်နှင့်ကျွန်တော်သူတို့နှင့်အတူလုပ်ဆောင်သင့်ပါတယ်နိုင်ရန်အတွက် Konya Konya နှင့် Karaman ၏ဆက်လက်အတွက်တိုတောင်းတဲ့အချိန်မှာသူတို့ကိုအားလုံးပြီးစီးဖို့မျှော်လင့်ပါတယ်။ "သူကဆိုသည်။ Konya-Karaman SPEED ရထားလမ်းစီမံကိန်း ...
Birdal မြန်ရထားစီမံကိန်းများ Apaydin ခဲ့သည်ကိုကွညျ့ရှု 06 / 04 / 2018 Izmir ကနေရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန, ဒုတိယဝန်ကြီး Undersecretary မှ General Manager Orhan Birdal နှင့် TCDD သွားရောက် İsa ApaydınIzmir - Banaz Esme မြန်နှုန်းမြင့်ရထားလိုင်းကိုအကြားဖြစ်ပွားနေသောဆောက်လုပ်ရေး, Alaşehir high-speed ကိုရထားလမ်းဆောက်လုပ်ရေး site ၏လေ့လာမှုများအတွက်တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ ပထမဦးစွာထို့နောက် TCDD နှင့်အတူနံပါတ် Manisa ရွေ့လျားခြင်းနှင့်မော်တော်ယာဉ်3နိုင်ငံတွေကိုခရီးလှကားတစ်စီး Birdal Apaydınနိုင်ငံတွေကိုခရီးလှအတွက် Adnan Menderes လေဆိပ် Menemen ထံမှİZBANရထားနှင့်အတူ။ ဒေသဆိုင်ရာတင်ပြချက်များဆက်စပ်လေ့လာမှုများကိုဖန်ဆင်းခဲ့သည်။ ထို့နောက်သူသည်ခရီးစဉ်နိုင်ငံတွေကိုခရီးလှနေချိန်မှာ Birdal နှင့် Apaydin အပေါ်ဘူတာရုံသွားရောက်ခဲ့ပြီးန်ထမ်းများနှင့်တွေ့ဆုံခဲ့သည်။ Birdal နှင့်မစ္စတာ Apaydin ပိုပြီး ...
အဆင်ပြေသည်ဆောင်ရွက်သောဝဘ်ဆိုက်Nurdağ Mills, ဥယျာဉ်မီးရထားစီမံကိန်းNurdağမျှော်ခဲ့ 06 / 08 / 2019 ဝန်ထမ်းနှင့်အတူလေ့လာမှုများ, စီမံကိန်းများနှင့်လယ်ပြင်အရာရှိများBaşpınarခရီးထွက်ခဲ့ဖူးတယ်ကြောင်း TCDD အထွေထွေဒါရိုက်တာအလီ Ihsan သင့်လျော်သော, အ Tours အသင်းမှာလည်းမြန်နှုန်းမြင့်ရထားများနှင့်ခရီးသည်ဘူတာရုံ၏အရပျ၌အလုပ်လုပ်ကြသည်။ Adana နှင့်ဥယျာဉ်-Nurdağရထားလမ်း၏သူတို့အားဆက်လက်ဆောက်လုပ်ရေးကြားတွင် Adana နှင့် Malatya အတွက် Gaziantep Nurdağ-Mills ကမြန်နှုန်းရထားလမ်းဆောက်လုပ်ရေးအတွက်လုပ်သင့်လျော်သည့်ကို double-ပြွန်ဥမင်လိုဏ်ခေါင်းစီမံကိန်းအားစီအီးအို၏တိုးတက်မှုကိုဆနျးစစျခံရဖို့ဆက်လက်အဆိုပါကန်ထရိုက်တာကုမ္ပဏီအရာရှိများအနေဖြင့်သတင်းအချက်အလက်ကိုလက်ခံရရှိခဲ့သည်။ တူရကီနှင့်အစ္စတန်ဘူလ် 55 17.5 ကီလိုမီတာရှည်လျားနှစ်ဆပြွန်ဟာအစာရှောင်ရထားစီမံကိန်း Mills ကNurdağ-ကီလိုမီတာဥမင်လိုဏ်ခေါင်းချိတ်ဆက် Gaziantep, 48,51 viaducts နှင့်မြေပေါ် culverts ...
ဤတွင် Ido ပြိုင်ဘက် BUDO ရဲ့စျေးနှုန်း (ဗီဒီယို) 13 / 01 / 2013 ... Bursa ၏ Bursa တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်လာမယ့် Ido ပြိုင်ဘက် BUDO - အစ္စတန်ဘူလ်ပင်လယ်ဘတ်စ်ကားအကြားပင်လယ်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးတစ်ခုကအခြားရွေးချယ်စရာဖြစ်လိမ့်မည်ကုမ္ပဏီတည်ထောင်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီတော့ Bursa တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်ကဒီလိုအပ်ချက်ဖြစ်ပေါ်စေခဲ့သလဲ စျေးနှုန်းများကိုဘယ်လို Ido အပေါ်အခြေခံပြီးမညျနညျး Bursa မြို့တော်ဝန် Recep Altepe, CNN သို့ Turk Cansu ထံမှမေးခွန်းများကိုတို့ပြည်ကိုဖြေသည်။ ရင်းမြစ်: CNNTURK
BCCI မှာ ITU နေရောင်ခြည်မော်တော်ကားရေးအဖွဲ့ 20 / 07 / 2018 စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းနှင့်စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များ Bursa ကုန်သည်ကြီးများအသင်း, အစ္စတန်ဘူလ်နည်းပညာတက္ကသိုလ်နေရောင်ခြည်မော်တော်ကားရေးအဖွဲ့ (ITU gaa) ဧည့်ခံ။ BCCI, သူတို့ကမိတ်ဆက်နှင့်တူရကီမှနေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံးမော်တော်ယာဉ် "သက်တံ့İSTKA" နှစ်ပေါင်းတစ်မျိုးဆက်သစ်တီထွင်ခဲ့ကြ Ito Dae ထွက်စမ်းသပ်နိုင်ရန်အတွက်ခရီးစဉ်၏ဧည့်သည်များဖြစ်ကြသည်။ အဆိုပါအဖွဲ့သည်ဒါရိုက်တာ Muhsin Koçasl BCCI ဘုတ်အဖွဲ့သွားရောက်ကြည့်ရှု လာ. Alparslan Şenocakသဘောတူညီခဲ့သည်။ ဒါရိုက်တာဘုတ်အဖွဲ့ပြီးနောက်နေရောင်ခြည်ကားတစ်စီးအသင်းကိုလယ် BCCI အကြောင်းသတင်းအချက်အလက်ကျောင်းသားများနှင့်အတူမော်တော်ယာဉ်ဆန်းစစ်ခဲ့သည်။ ITU နေရောင်ခြည်မော်တော်ကားအဖွဲ့ကသမ္မတİTUD Hasan Tuğcuအတွက် Bursa မှခရီးစဉ်အတွင်းလိုက်ပါသွားခဲ့သည်။ သူ၏မိန့်ခွန်းထဲမှာ BCCI ဘုတ်အဖွဲ့အဖွဲ့ဝင် Muhsin မော်တော်ကားKoçaslလူငယ်များမှကိုင်တွယ်ဖြေရှင်း "ကျွန်တော်တို့ရဲ့လူငယ်ဂုဏ်ပြုပါသည်" ...
Bursa ညှိနှိုင်းရေးနှင့်နည်းပညာ R & D Center က
စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များ Kayseri ကုန်သည်ကြီးများအသင်း
စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေး Kayseri ကုန်သည်ကြီးများအသင်း
အုပ်ချုပ်ရေးမှူး Jumblatt, ကိုပြန်လည်သုံးသပ်သည့် BCCI ရဲ့နည်းပညာ oriented စီမံကိန်းများ
အလင်းနှင့်အတူစောင့်ရှောက်ခြင်း၏အနာဂတ်အပေါ် BCCI ရဲ့ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးကဏ္ဍအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ
Kayseri Kayseri, စီးပွားရေးလောကကနေ Samsun ရထားလမ်းခေါ်ဆိုခပြုပြင်ကြနေကြတယ်
İsa Apaydın TCDD Konya အတွက်စီမံကိန်းခဲ့ကွညျ့ရှု
ဝန်ကြီး Arslan, သုံးသပ်ရန် TCDD Konya စီမံကိန်းများ
Birdal မြန်ရထားစီမံကိန်းများ Apaydin ခဲ့သည်ကိုကွညျ့ရှု